2015 CalendarGuide BookBanca NewsletterPostersWild Life MovieReportsBecome A MemberMember PolicyContact
HomeReturn HomePhoto CornerTools and ModulesPublication & MultimediaFind Help Here2015 CalendarGuide BookBanca NewsletterPostersWild Life MovieReportsBecome A MemberMember PolicyContact
Search...	Species	Baer’s Pochard
Baer’s Pochard ရေဘဲငှက်မျိုးစိတ်သည် မျိုးသုန်းလုနီးပါးအန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့နေရသောမျိုးစိတ်ဖြစ် သည်။ ရုရှားနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့တွင် ဥ ဥ၊ သားပေါက်ပြီး ဆောင်းရာ သီတွင် တရုတ်ပြည်ဆောင်ပိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ ဘူတန်၊ ဟောင်ကောင်၊ နီပေါ၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဖီလစ်ပိုင် အစရှိသောနိုင်ငံများ တွင်ဆောင်ခိုကြသည်။ မေလအလယ် လောက်တွင် သားပေါက်ရန်နေရာသို့ပြန်ရောက်လာကြပြီး မေလတွင် ငှက်အမများက စတင်၍ ဥ ဥ ကြသည်။ ဥအရေအတွက် ၉ ဥ မှ ၁၅ ဥအထိဥလေ့ရှိသည်။ အသိုက်ဆောက်ရာတွင် တစ်သိုက်နှင့်တစ်သိုက်နီးကပ်စွာ ဆောက်လေ့ရှိသည်။ အခြားငှက်မျိုးစိတ်များ၏ အသိုက်အနီးတွင်လည်း အသိုက်ဆောက်တတ်ကြသည်။ အချို့ သော Baer’s Pochard အမများသည် ၎င်းတို့၏အနွယ်ဝင်ရေဘဲငှက်မျိုးစိတ်များဖြစ်သည့် Common Pochard, Gadwell တို့၏အသိုက်ထဲတွင် သွားရောက်ဥ ဥလေ့ရှိသည်။ ၂၃ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိဝပ်ပြီးလျှင်သားပေါက် သည်။ ငှက်အမက ဥများကိုဝပ်နေ့သည့်အချိန်တွင် ငှက်အဖိုက ငှက်အမကိုအစာရှာကျွေးပြီး အခြားငှက်များ၏ အန္တရာယ်မှကာကွယ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ငှက်ကလေးများသားပေါက်ရာတွင် အရင်ဆုံးပေါက်လာသည့်ငှက် ကလေးများက ကျန်သည့်ဥများအကောင်ပေါက်လာသည့်အထိ အသိုက်အနီးတွင်သာနေကြသည်။ သို့ရာတွင် အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာကျရောက်လာပါက အကောင်ပေါက်ရန်ကျန်နေသောဥများကို ငှက်အမကစွန်ခွာသွား တတ်သည်။
၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် BANCA အသင်းမှ ထိုမျိုးစိတ်ကို စစ်တမ်းကောက်ယူရာ မန္တလေးတိုင်း တံတားဦးမြို့နယ်ရှိ ပျူကန်၌ ဇန္န၀ါရီလတွင် ၁၂ ကောင်၊ မတ်လတွင် ၄ ကောင်တွေ့ရှိမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ သည်။ အဆိုပါပျူကန်သည် သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသောကန်ဖြစ်ပြီး အနီးအနားရှိရွာများအတွက် နွေရာသီ၌ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်ရန် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှ စီမံကွပ်ကဲနေသော ကန်ဖြစ်သည်။ ထိုကန်တွင် ရေဘဲမျိုးစိတ်များကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်မှုများ နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရ သည်။ ပျူကန်အနီးရှိ ပျူရွာအပါအဝင်အခြားရွာများသည် ထိုကန်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ငါးဖမ်းခြင်းမရှိသည် ကိုထူးခြားစွာတွေ့ရှိရသည်။ ထိုသို့ကန်အတွင်း ဆင်းရောက်ခြင်းမရှိခြင်းမှာ မိရိုးဖလာယုံကြည်သက်ဝင်မှု အရဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Pink-headed Duck (ဘဲခေါင်းပန်းရောင်)
မျိုးသုန်းလုနီးပါးအခြေအနေနှင့်ကြုံတွေ့နေရသော ရေပျော်ငှက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးကိုယ်လုံးမှာမည်းညိုရောင်၊ ခေါင်းနှင့် နှုတ်သီးမှာပန်းရောင်ဖြစ်သည်။ ဘဲခေါင်းပန်းရောင်မျိုးစိတ်ကိုယခင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတို့တွင် အမြောက်အများရှိခဲ့သည်ဟုယူဆရပြီး ၁၉၅၀ ခုနှစ်မှစ၍ မျိုးသုန်းပျောက်ကွယ်သွားသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် Charles M. Inglis ဆိုသူက အိန္ဒိယနိုင်ငံ Bihar ပြည်နယ်ရှိ ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည့် Darbhanga တွင် ဘဲခေါင်းပန်းရောင်မျိုးစိတ် ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ သူသည် ဘဲခေါင်းပန်းရောင်မျိုးစိတ်မှန်းမသိဘဲပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သူ၏နောက်လိုက် ခွေးကသူထံသို့ကိုက်ချီသယ်ဆောင်လာသောအခါတွင်မှသာ အဆိုပါမျိုးစိတ်မှန်းသိရှိခဲ့သည်။ ထိုတွေ့ရှိမှုမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရ ဘဲခေါင်းပန်းရောင်ကိုနောက်ဆုံးတွေ့ရှိမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ConservationSpeciesLivelihoodLatest NewsOffice LocationWhere We WorkOur HistorySitemap
Join our newsletter to get latest news of our association.	Contact With Us
Biodiversity And Nature Conservation Association (BANCA)Myanmar Registered Charity 1/Local/0141
Website : http://banca-env.org/
Web Developer: Myanmars.NET, Yangon, Myanmar. © Copyright 2017 by BANCA-ENV.